Top Summer Activities ao San Antonio
Etazonia Texas San Antonio
San Antonio no toerana fialantsasatra indrindra any Texas. Ary, mazava ho azy, ny fahavaratra dia fotoana fialantsasatra malaza indrindra. Miala sasatra ny vakansy ety sy San Antonio. Be dia be ny mahita sy manao any amin'ny tanànan'i Alamo mandritra ny vakansy fahavaratra. Manomboka amin'ny filalaovana ny RiverWalk amin'ny fanaovana fientanentanana amin'ny Six Flags Fiesta Texas, dia misy fomba maro hanatanterahana ny fialan-tsasatra mandritra ny lohataona any San Antonio .
Mandany andro amin'ny fe-potoana enina Fiesta Texas
Seven Flags Fiesta Texas. Danno Wise
Seven Flags Fiesta Texas dia fomba tsara handany andro iray any San Antonio mandritra ny vakansy fahavaratra. Avy amin'ny fanatanjahantena mahafinaritra mankany am-pivarotana karnavaly, dia betsaka ny manao any Fiesta Texas fa ny ankamaroan'ny fianakaviana dia manana fotoana henjana mametraka azy rehetra ao anatin'ny iray andro. Ary, mandritra ireo volana fahavaratra, raha kely loatra ny hafanana, dia afaka miala sasatra any amin'ny iray amin'ireo valan-drano eny an-kianja ny Fiesta Texas na ao anaty fiaramanidina Fiesta Texas. Ireo ankizy madinika koa dia miala amin'ny fahitana ireo tarehimarika misy ny Looney Toon izay miala ny kianja.
Get Wowed ao amin'ny SeaWorld San Antonio
SeaWorld San Antonio dia manana fampiratiana biby an-jatony, manomboka amin'ny vorona mankany amin'ny fiainana an-dranomasina. Ny kianja ihany koa dia manasongadina ny 'Seafari Tour,' fandaharam-pifanakalozan-kevitra, toby avotra ary bebe kokoa. Ny Valan-javaboary Lost Lagoon, izay miorina eo amin'ny sehatry ny SeaWorld, dia toerana malaza ho an'ny mpitsidika, raha ny "Great White Games Center" dia manome fialamboly an-trano. Miaraka amin'ny fanomezana betsaka, tsy mahagaga raha ny SeaWorld dia iray amin'ireo mpizaha tany malaza indrindra any San Antonio. Na izany aza, ny mpitsidika dia tokony havaozina fa saika tsy azo atao mihitsy ny mandray azy io mandritra ny fitsidihana tokana. Mba hanampiana ireo olona te-hijanona ela kokoa, dia manome karazana fandaharana vakansy i SeaWorld.
Tsidiho ny Zoo San Antonio
Iray amin'ireo zozoro lehibe indrindra ao amin'ny firenena ny Zoo San Antonio dia manana biby maherin'ny 3.500, ka mahatonga azy io tsy maintsy mahita ankizy sy olon-dehibe mitovy. Ny biby toy ny orsa mihetsiketsika, rhinoceros, giraffa, tiger Sumataran, kangaroo, ocelot, elefanta, ary karazam-borona maro sy biby mandady am-polony dia manome mpitsidika maro hijery. Ireo biby ireo dia raketina enina eo ho eo amin'ny zavakanto. Ny mpitsidika koa dia manana safidy hakana ny fiarandalamby Zoo ho fitsidihana ny toerana misy ny zoo.
Mandehandeha - na mitsangatsangana - manerana ny San Antonio RiverWalk
Ao afovoan-tananan'i San Antonio, ireo banky ao San Antonio dia miaraka amina trano fisakafoanana marobe, trano fidiovana, hotely ary fivarotana. Ny renirano Rivercenter koa dia fijanonana malaza ary ny Distrikan'i Historic District La Villita, izay feno trano fivarotana sy trano fisaka, dia eo ambonin'ny Riverwalk. Ny fiezahana manandrify ny RiverWalk dia fotoana tena tsara hialana amin'ny ora fahavaratra amin'ny andro fahavaratra. Ny boatin-dalan'ny renirano koa dia misy ary malaza amin'ny mpitsidika.
Ny mahagaga ambanin'ny tany, ny Bridge Bridge Caverns dia mampiseho ny fianakaviana ny andanin'izao tontolo izao izay tsy hitan'izy ireo. Ankoatra ny fitsangatsanganana ambanin'ny tany, ny Natural Bridge Caverns dia manolotra hetsika fanabeazana etsy ambony ho an'ny ankizy isaky ny sokajin-taona rehetra. Ary, satria mahamay kokoa noho ny ety ambonin'ny tany ny mpitsidika, dia afaka miala amin'ny hafanana 70 degre ny mpitsidika amin'ny andro mafana mafana.
Tsidiho ny Museum
San Antonio dia miorina amin'ny tranom-bakoka tsy manam-paharoa, tany am-boalohany ary am-piainana - ny ankamaroan'izy ireo dia mifanakaiky amin'ny sehatr'ilay tanàna, ny Alamo. Mandritra ny ora fiasan'ny andro, raha ny hafanana amin'ny fahavaratra dia eo amin'ny tampony, ny mipentimpentina ao anatin'ireo tranom-bakoka maro ireo dia fomba iray mahafinaritra sy mahafaty ny hafanana amin'ny fotoana iray ihany.
Andron'ny mpifankatia any San Antonio
Tari-dalana momba ny fitsangatsanganana ho an'ny fitsidihana an'i San Antonio amin'ny teti-bola
Fiesta Week any San Antonio, Texas
Spooktacular Halloween Events tamin'ny Oktobra
San Antonio fanatanjahan-tena an-kalamanjana
San Antonio Rodeo: Torolalana feno
May Kalandrieran'ny Event ao Oklahoma City
Kolotsaina: Ny Torolalana roa Herinandro
Fialantsasatry ny toeram-ponenana ao Sherwood sy ny Waterpark - Zumbrota, Minnesota
Ny Torolàlana Farany Ho An'ny Seoul
Mivarotra amin'ny hôpitaly any Tahiti sy Polinezia frantsay
Taridalana avy any ambanivohitra ho an'ny National Airlines Afrikana
Ny Top 10 Things to Do in Antwerp
Hetsika Oktobra tsara indrindra any Paris
5 amin'ireo fanomezana tsara indrindra Smartphone Accessories ho an'ny mpandeha
Fialan-tsasatra tsara indrindra ho an'ny New York Restaurant Week
Ny fanao nentim-paharazana any Kroasia
Aiza ny trano Opera'i Sydney?
10 Mumbai Tours mahaliana